မ်က္ႏွာေပၚက တင္းတိတ္နဲ႔ ေနေလာင္အမဲကြက္ အျမန္ဆုံးေပ်ာက္ကင္းနည္း - Focus Myanmar
August 9, 2019 By Myanamr Plus in အလွအပ Tags: အမဲကြက္
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်နဲ့ နေလောင်အမဲကွက် အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနည်း
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေး ကြည်လင်ဝင်းပ သန့်စင်နေတာကိုပဲလိုလားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်အမျိုးသမီး အမျိုးသားလေးတွေ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒက ကိုရီးယားမင်းသား မင်းသမီးလေးတွေလို ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် ဖွေးသန့်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးတွေ ဖြစ်ချင်ကြတာပါ။
အမှန်ပါပဲ၊ မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ် နေလောင်အမဲကွက်တွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ရုတ်လျော့စေပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ တင်းတိတ်အမဲစက် ပျောက်ဆေးတွေ ရောင်းနေကြပေမယ့် ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ တစ်ကယ်ရော ပျောက်ကင်းပြီး အလုပ်ဖြစ်ကြပါရဲ့လား..?
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ပိုက်ဆံအကုန်အကျ အသက်သာဆုံးနဲ့ မိမိရဲ့ နေအိမ်မှာရှိတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း တင်းတိတ်အမဲစက်တွေ ကင်းပျောက်စေမယ့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုးကြီးများတောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့် မျက်နှာမှာ အမဲကွက်တွေ ဖြစ်လာရတာကတော့ အသားအရေမှာ မယ်လနင် လို့ခေါ်တဲ့ အမည်းရောင်ဒြပ် ထုတ်လုပ်မှုများတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုမုန်းမညီမျှမှု၊ နေလောင်ဒဏ်လွန်ကဲစွာခံရခြင်း၊ ဆေးတွေသောက်နေရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစိခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်မှု့အားနည်းခြင်း၊ အဟာရချို့တဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တင်းတိတ်နေလောင်အမည်းကွက်တွေ ပျောက်ကင်းအောင် လေဆာကုထုံးနဲ့ ကုသနိုင်ပေမယ့် အလွန်ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်တွင်းဖြစ်လေးတွေနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနည်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်က အမဲကွက်တွေ ပျောက်ကင်းဖို့ဆိုရင် သံပရာသီးက အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ သံပရာရည်မှာ ဗီတာမင်စီနဲ့ အခြားသဘာဝ အဟာရဓါတ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်ပြီး အဲဒါတွေက အမဲကွက်တွေကို ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သံပရာသီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်း၊ အရည်ညှစ်ပါ။ အရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ တို့ယူပြီး အမဲကွက်နေရာကို တို့သုတ်ပြီး တစ်နာရီကနေ ၂ နာရီလောက်ထိ ထားပေးပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာကို သန့်စင်အောင်ဆေးကြောပါ။
အနည်းဆုံး တစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ သံပုရာရည် သုတ်လိမ်းထားပြီးချိန်တွင် နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျသော နေရာသို့ မသွားမိစေရန် သတိထားပါ။
အကယ်၍ မိမိအသားအရေက သာမန်ထက်နူးညံ့ပါက သံပုရာရည်ထဲတွင် ရေ တစ်စက် နှစ်စက် ရောစပ်လိမ်းပါ။ မျက်နှာတွင် ပေါက်ပြဲနာရှိရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
အာလူးဟာလည်း မီးဖိုဆောင်ထဲမှာ အလွယ်တကူရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလူးမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်သဘာဝတွေဟာ အသားအရေ ဝင်းဝါဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးမယ်ဆိုရင် သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ တင်းတိတ်အမဲကွက်တွေ လျော့နည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလူးကို ခပ်ထူထူ အကွင်းလေးတွေလှီးပြီး အမဲကွက်ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ နာရီဝက်(သို့)ခြောက်သွေ့သည်ထိ ကပ်ပေးထားပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာကို သန့်စင်စွာဆေးကြောပါ။
ဒုတိယနည်းကတော့ အားလူးကို အခွံနွှာပြီး ခြစ်ပါ၊ ပျားရည်အနည်းငယ်နဲ့ ရောပြီး မျက်နှာပေါ်က အမဲကွက်ရှိတဲ့နေရာမှာ မိနစ် ၂၀ ကနေ ၃၀ လောက်ထိ ထားပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာကို သန့်စင်စွာဆေးကြောပါ။ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်လုပ်ဆောင်ပါ။
အသားအရေ အလှအပနဲ့ ပက်သက်လာရင်တော့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာ သဘာဝရဲ့ လက်ဆောင်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ဓါတ်သဘာဝတွေမှာ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိတ်၊ အမဲစက် စတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို ဝင်းဝါစေပါတယ်။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှားစောင်းလက်ပတ် ကို ဓားနဲ့ခွာယူပြီး ရလာတဲ့ အကြည်ရောင်အနှစ်လေးတွေကို မျက်နှာမှာ လိမ်းကျံပြီး ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်ထိ ထားပါ။ ပြီးနောက် ရေနဲ့ မျက်နှာကို ပြန်လည်သန့်စင်ပါ။
ဆန္ဒရှိပါက ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို နနွင်းမှုန့်၊ သံပုရာရည် အနည်းငယ်တို့ ရောစပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါနည်းအတိုင်း တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ် နှစ်ပတ်ခန့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ ထူးခြားလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနို့ရည်ရဲ့ အစွမ်းကတော့ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေကို ပြုပြင်ပေးပြီး အမဲကွက်တွေကို လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။ နို့ရည်မှာပါတဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ် က အလှအပရေးရာတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်ခွက် တစ်ဝက်စာနို့ရည်ထဲကို ခရမ်းချည်သီးအရည်၊ သံပုရာရည် အနည်းငယ်တို့နဲ့ ရောစပ်ပြီး မွှေပါ၊ ပြီးနောက် အမဲကွက်နေရာကို လိမ်းကျံပြီး ၁၅ မိနစ်ကနေ ၂၀ မိနစ်လောက်ထိ အခြောက်ခံထားပါ။ ပြီးနောက် ရေနဲ့ မျက်နှာကို ပြန်လည်သန့်စင်ပါ။
အကယ်၍ ထိရှလွယ်သော အသားအရေဖြစ်ပါက နို့ရည်ချည်းသက်သက်သာ လိမ်းကျံပါ။ တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာ ကျောက်ပျဉ်နဲ့ နံ့သာဖြူသနပ်ခါးတုံးရှိပါက အသုံးပြုနိုင်သလို နံ့သာဖြူသနပ်ခါးမှုန့်နဲ့လည်း စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
သနပ်ခါးတုံးနဲ့ အသုံးပြုလိုပါက ပုံမှန်အတိုင်း သွေးပြီး မျက်နှာအမဲကွက်များအပေါ် ခပ်ထူထူလေး ပုံလိမ်းထားပါ။ အကယ်၍ အမှုန့်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းစာ နံ့သာဖြူမှုံ့ကို ယူပြီး ရိုးရိုးရေ (သို့) နှင်းဆီရနံ့ပါရေနဲ့ ရောစပ်ပြီး လိမ်းပါ။
၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်ထိ လိမ်းကျံထားပြီး မျက်နှာကို ရေဖြင့်ပြန်ဆေးကြောပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ထိ လုပ်ဆောင်ပါက အမဲကွက်များ သိသာစွာ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။
ဟိုရှေးယခင်ကတည်းက အသားအရေနဲ့ပက်သက်လာရင် နနွင်းစစ်စစ်ကို သုံးစွဲလာကြတာ ယနေ့ထိတိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နနွင်းမှာလည်း အရေပြားဆဲလ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့၊ အသားအရေ ဝင်းဝါစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပါတယ်။
နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းစာကို သံပုရာရည်၊ နွားနို့တို့နဲ့ ရောနယ်ပြီး အနှစ်ရအောင် လုပ်ပါ။ ပြီးနောက် အမဲကွက်နေရာကို လိမ်းကျံပြီး ခြောက်တဲ့အထိ ထားပါ။ ပြီးနောက် ရေနဲ့ပြန်လည် သန့်စင်ပါ။
ဒီနည်းကို တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ တစ်လလောက် သုံကြည့်တာနဲ့ အမဲကွက်တွေ သိသိသာသာ လျော့ပါးသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အိမ်မှာ အလွယ်တစ်ကူရရှိနိုင်တဲ့ ကုလားပဲမှုန့်ကလည်း အသားအရည်ဝင်းဝါဖို့ အမဲကွက်တွေပျောက်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာ ကုလားပဲမှုန့်ထဲကို သံပုရာရည်၊ ဒိန်ချည် အနည်းငယ်၊ နနွင်းလက်တစ်ဖျစ်စာနဲ့ ရေတို့ကို ရောစပ်ပြီးအနှစ်ပျစ်ပျစ်လေးရအောင် သမမွှေပါ။ အမဲကွက်နေရာကို လိမ်းကျံပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ၊ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း အမဲကွက်တွေ လျော့ပါးသွားတာ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း သန့်စင်နိုင်တဲ့အစွမ်းက ကွေကာအုပ်မှုန့်မှာလည်း ရှိပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာ ကွေကာအုပ်မှုန့်ကို ရေ၊ သံပုရာရေ လက်ဖက်ရည် တစ်ဇွန်းစာစီနဲ့ ရောမွှေပါ။ ရလာတဲ့ အနှစ်ကို အမဲကွက်ပေါ် လိမ်းကျံပါ။
၁၀ မိနစ်ခန့် အခြောက်ခံထားပြီးမှ ရေနဲ့ ပြန်လည်သန့်စင်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ။
သင်္ဘောသီးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရုံမျှမက ချွတ်ရခက်တဲ့ အမဲကွက်တွေနဲ့ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို အချပ်ထူထူလေးလှီးပြီး အမဲကွက်ရှိတဲ့နေရာကို ၁၀ မိနစ်ခန့် ကပ်ပေးထားပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာကို ရေနဲ့ပြန်လည် သန့်စင်ပါ။
နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ သင်္ဘောသီးကို ခြစ်ပြီး ရလာတဲ့ အဖတ်လေးတွေကို ကြေအောင် ကြိတ်ချေပါ ပြီးနောက် ဆနွင်း၊ သံပုရာရည် အနည်းငယ်ကို ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။ အမဲကွက်ရှိတဲ့နေရာကို လိမ်းကျံပြီး ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
ဒီနည်းအတိုင်း အတိုင်း တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ သင်္ဘောသီးအခွံဟာ တံတောင်ဆစ်နေရာ၊ ဒူးနေရာမဲတာတွေကိုပါ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ထင်တောင်မထင်မှတ်ထားဘူးမဟုတ်လား..? ကြက်သွန်နီရဲ့ အစွမ်းကလည်း အမဲကွက်တွေကို ထွက်ပြေးသွားစေပါလိမ့်မယ်။
ကြက်သွန်နီကို အရည်ရအောင် ကြိတ်ပါ/ထောင်းပါ။ ကြက်သွန်နီရည်ကို ဂွမ်းစနဲ့တို့ပြီး အမဲကွက်နေရာမှာ တိုက်ရိုက်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီးရင် မျက်နှာကို ပြန်လည် သန့်စင်ပါ။
ကြက်သွန်နီအရည်ထဲကို ပျားရည်အနည်းငယ် ရောစပ်ပြီး အမဲကွက်နေရာမှာ ၁၀ မိနစ်ခန့်လိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ရေနဲ့ သန့်စင်အောင် ပြန်လည်ဆေးကြောပါ။
ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျမများပဲ မီးဖိုဆောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်နှာပေါ်က နေလောင်အမဲကွက်တွေကို သက်သာလျော့ပါးစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ..။